Taliyaha booliska Soomaaliya oo shir uga qaybgalaya dalka Qatar – Radio Daljir
Taliyaha booliska Soomaaliya oo shir uga qaybgalaya dalka Qatar
Febraayo 28, 2018 8:34 b 0
Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya Bashiir Maxamed Jaamac(Bashiir Goobe) ayaa gaaray magaalada Dooxa ee xarunta dalka Qadar, halkaasi oo uu kaga qaybgali doono shir lagu casuumay.
Hadal kooban uu siiyay warbaahinta ayuu ku sheegay inuu gaaray Dooxa oo lagu casuumay shir kadhici doona.
Taliyaha ayaan fahfaahin ka bixin shirkan waxaa looga hadli doono.
Dowladda Qatar oo ay go’doomiyeen dowladaha Khaliijka ayaa ka wada Soomaaliya qorshe ay uga qornayso ciidamo Soomaaliyeed, kuwaasi oo aan la’ogayn inay dowladda ka war qabto iyo in kalle.
Al-shabaab oo lagala wareegay deegaan katirsan Hiiraan